Budata Hawker Dinta Trainers FSX - Rikoooo
downloads 13 994
Emelitere na 12 / 06 / 2018: Ndị ọzụzụ ụgbọ mmiri Hawker dakọtara ugbu a Prepar3D v4. NUMdị 10.5 ọhụrụ
HAWKER HUNTER T7 & T8 ụdị zuru ala FSX SP2 nwere ihe mgbochi na akwara.
7 dị iche iche ụdị na a ngụkọta nke 14 textues
Gauges kpamkpam modeled na 3D na larịị.
2D kokpiiti (oche pilot ma ọ bụ ngalaba-pilot)
dị iche iche animations
The Hawker Hunter bụ a British ugboelu fighter ike nke na supersonic ụgbọ elu na-emighị emi amaba. O mere ya mbụ ụgbọ elu na 1951 na e wuru na ngụkọta ka ihe fọrọ nke nta 2,000 mbipụta, na-eji ihe karịrị iri abụọ mba ruo mgbe mbubreyo 1990s. Ukwuu ekele ọkwọ ụgbọala, Hunter nwere ezi arụmọrụ n'ihi na oge ịbụ ma ngwa ngwa, ukwuu manoeuvrable na siri ike. Na 2011, naanị Air Force na Lebanon ka na-eji nke a ụgbọ elu ke arụmọrụ ọrụ, ma ndị ọzọ na ngwaọrụ na-emejuputa atumatu oru site onwe ụlọ ọrụ.
Onye edemede: Dave Garwood